​भट्टराई र यादवले पार्टी एकता हुँदै, यादव खुसुक्क निर्वाचानमा गए मोर्चा के होला ?
Wednesday, 12 Apr, 2017 10:01 AM
३० चैत, काठमाडौं । अन्तत लामो बहस र छलफल पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच पार्टी एकता हुने भएको छ । एकताको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको र कुनै अग्राख नपलाए नयाँ वर्ष अवसर पारेर बैशाख पहिलो सातामै एकता घोषणा हुनेछ । एकतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता कमिटीका साथै शीर्ष स्तरमा पनि सम्वाद चलिरहेको बताइएको छ । वार्ता कमिटी स्तरबाट टुंगो नलागेका विषय टुग्याउने जिम्मा दुबै पार्टीका नेताद्वय डा. भट्टराई र यादवलाई दिइएको छ । ‘घोषणापत्र, झण्डा, चुनाव चिन्हजस्ता विषयमा लगभग सहमति भएको बताइएको छ ।
एकतापछि पार्टीको नाम पनि परिवर्तन गर्ने सहमति भएको र नाम पनि अन्तिम टुंगो लगाउने क्रममा रहेको बताइएको छ । पार्टी उकतापछि पार्टी अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई नै रहने बताइएको छ । पार्टीमा अन्य नेताहरुको पद र जिम्मेवारी पनि टुंगो अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । पार्टी एकतासँगै संविधान संशोधनलाई जोडदार रुपमा अगाडी बढाउने तयारी रहेको छ । तर निर्वाचनमा भाग लिने नलिने विषयमा भने विवाद रहेको बताइएको छ । नयाँ शक्तिका एक नेताका अनुसार उपेन्द्र यादव निर्वाचनमा जान त्यति नरूचाएपनि भट्टराईले निर्वाचनलाई उपयोग गन्पर्ने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार पार्टी एकतापछि जनमत बढ्ने भएकाले निर्वाचनमा जानैपर्ने अधिकांशको जोड भएकाले पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने संभावना बढेको छ ।